အပြစ်မှ ရွှေးနုတ်ဖြေလွတ်ခြင်း | A Description of the Atonement | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၉ကြိမ်မြောက်ဒေသနာတော်)
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ဘြွမ ။ဩွခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှ သူ့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အဘယ်သူပြညွန်လိမ့်မည်နည်း။ ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏။” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
အစောပိုင်းက ကျမ်းပိုဒ်၌ ခရစ်တော်၏နုတ်မဖွင့် မြည်တမ်းခြင်း မရှိခြင်းအကြောင်းကို ဟေရှာယက ပြောကြားခဲ့သည်၊
“ထိုသူသည် ညင်းဆဲခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်းကိုခံ၍ နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ ၏။ အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ်သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နုတ်ကိုမဖွင့် ဘဲနေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၇)။
ဒေါက်တာ အက်ဝတ်ဒ် ဂျေ.ယန်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ခရစ်တော်သည် ပြင်းထန်သောညှင်း ဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကို သည်းခံခဲ့သည်၊ ယခုတွင် ပို၍ပြင်းထန်သော ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းအကြောင်း ပရော ဖက်က ဖော်ပြခဲ့သည်” (Edward F. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 351).
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ အသက်ရှင်သော သူတို့၏ နေရာမှသူ့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အဘယ်သူ ပြညွန်လိမ့်မည်နည်း။ ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏။” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
ဤကျမ်းပိုဒ်၌ အချက်သုံးချက် ပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါသည်။ (၁)ခရစ်တော်၏ ဝေဒနာ၊ (၂)ခရစ်တော် ၏မျိုးဆက်သစ်နှင့်၊ (၃)ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်း ဟူ၍ခွဲခြားထားပါသည်။
၁။ ပထမ၊ သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော်၏ဝေဒနာကို ဖော်ပြထားပါသည်။
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ အသက်ရှင်သော သူတို့၏ နေရာမှ သူ့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍။” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
ခရစ်တော်ကို ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်အား ဗိမာန်တော်အစောင့် တို့က ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ထံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး ကာယာဖထံသို့၎င်း၊ ဂျူး လွတ်တော် စင်ဟတ်ဒရိမ်ထံသို့၎င်း၊ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်အား မတရားစွပ်စွဲပြီး အပြစ်ပေး ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“လူသားသည် တန်ခိုးတော်၏ လင်္ကျာဘက်၌ထိုင်လျှက်၊ မိးတိမ်ကိုစီး၍ ရူအးကလာသည်ကို သင်တို့မြင်ရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (မဿဲ ၂၆း၆၄)။
“အဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊ ထိုသူတို့က ဤသူသည် အသေခံထိုက် ပေ၏ဟု ပြန်၍စီရင်ကြ၏။ ထိုအခါမျက်နှာတော်ကို တံတွေးနှင့်ထွေးကြ၏။ လက်သီးနှင့် ထိုးကြ၏” (မဿဲ ၂၆း၆၆-၆၇)။
“နံနက်အချိန်ရောက်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူ အပေါင်းတို့သည် ယေရှုကိုသတ်အံ့သောငှါ တိုင်ပင်၍” (မဿဲ ၂၇း၁)။
သို့သော်၊ အသေသတ်ခြင်းအခွင့် သူတို့၌မရှိ၊ အကြောင်းမှာ ရောမအစိုးရလက်၌သာ ရှိသည်၊
“ကိုယ်တော်ကို ချည်နှောင်ပြီးလျှင် မြို့ဝန်မင်းပုန္တိပိလတ်ထံသို့ ပို့ဆောင်သွား၍ အပ်လိုက် ကြ၏” (မဿဲ၂၇း၂)။
ပိလတ်မင်းက ယေရှုအား မေးမြန်းသည်အပြီး၊
“ယေရှုကို ကားတိုင်ရိုက်ပြီးလျှင် လက်ဝါးကားတိုင်မှာ သတ်စေခြင်းငှါ အပ်လိုက်လေ၏” (မဿဲ၂၇း၂၆)
ဤသို့ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရွှေးချယ်သော ကျမ်းပိုဒ်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့ကြသည်။
“မတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။” ဟူသောကြိုတင်ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့် စုံဖို့ရာ ယုဒလွတ်တော်မှ ဂျူးလူမျိုးများနှင့် ပိလတ်မင်းက မတရားစီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ “မတရားစီရင် ခြင်း” ဟူသော စကားစုပြည့်စုံဖို့အလို့ငှါ ကာယာဖရှေ့၊ ပိလတ်မင်းရှေ့၌၎င်း စစ်ကြောခြင်းခံခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကာရာနီကုန်းပေါ်သို့ မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ “အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှ သူ့ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍” ဟူသောကျမ်းစကားပြည့်စုံဖို့ အလို့ငှါ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ထက်အသေခံသွားခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီး (၁၆၉၇-၁၇၇၁)ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ကိုယ်တော်သည် ပူပန်သောကများ စွာဖြင့် မတရားစီရင်ခြင်းခံရသည်၊ ပြင်းထန်သောစီရင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်ကို ထုတ်သွားကြ သည်။ မတရားစီရင်ခြင်းအတိုင်း၊ ကိုယ်တော်အား မတရားစွပ်စွဲပြစ်တင်လျှက် စီရင်ခဲ့ကြ သည်။ မှားယွင်းသောသက်သေ အထောက်အထားများဖြင့် သက်သေခံခဲ့ကြသည်။ မတရား နုတ်ထွက်စကားများဖြင့် ကိုယ်တော်အား လူဆိုးတို့၏လက်ဖြင့် စီရင်ခဲ့ကြသည်။ တမန်တော် ၈း၃၂တွင်၊ (“အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ်သောသူရှေ့မှာ မမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏”) ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်။ ငြွကြွိုယ်တော်သည် စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချစွာဖြင့် အသေသတ်ခြင်းငှါ ထုတ် ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။။ြွင တရားမျှတမှုကို ကိုယ်တော်မရရှိခဲ့ပေ။ (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume V, p. 314).
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှ သူ့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
၂။ ဒုတိယ၊ သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော်၏မျိုးဆက်သစ်ကို ဖော်ပြသည်။
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အဘယ်သူပြ ညွန်လိမ့်မည်နည်း? အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှ သူ့ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
“သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အဘယ်သူပြညွန်မည်နည်း”၊ ထိုစကားစုကို ဒေါက်တာဂီးလ် ရှင်းပြခဲ့ သည်မှာ၊ “ကိုယ်တော်သက်ရှိထင်ရှားစဉ် လူတို့သည် ကိုယ်တော်အား ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်း၊ ဆိုး သွမ်းမိုက်မဲ့သောသူ၊ နုတ်အားဖြင့်မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းခြင်းဖြစ်၏” (Gill, ibidိ). ကိုယ်တော်ဘုရားအား မည်မျှရက်စက်ယုတ်မာသော လူဆိုးတို့လက်ဖြင့် မတရားစီရင်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သောအခါ၊ စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ ဝမ်းနည်းခြင်းမျက်ရည်များပင် ဝဲရပါသည်! ယောသပ် ဟတ်စ်(၁၇၁၂-၁၇၆၈) သီကုံးသောဓမ္မသီချင်းပမာဖြစ်၏၊
ကြီးမားလက်တော်ဖြင့် အပြစ်သားအား ကယ်ယူ
(၁၇၁၂-၁၇၆၈ ခုနှစ် ယောသစ်ဟတ်ခ် သီကုံးသော “ကိုယ်တော်၏ဝေဒနာ”ကို
သင်းအုပ် ဆရာမှ “ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းသံစဉ်ဖြင့်
(၁၆၀၁-၁၆၆၉) ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အဘယ်သူက အမှန်တကယ်ကိုယ်တော် မျိုးနွယ်ကို ညွန်ပြမည်နည်း?” ကိုယ်တော်အသက်ရှင်ထင်ရှားစဉ်၌ ဆိုးသွမ်းသူများသာ ရှိကြသဖြင့် အဘယ်မည်သူက ကိုယ်တော်၏မျိုးနွယ်ကို ညွန်ပြမည်နည်း?” (John Trapp, A Commentary on the Old Testaments, Transki Publications 1997 reprint, volume 3, p.410).
လူသားအနေဖြင့်ရှင်းပြဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဂျူးလူတို့သည် ယေရှုကို ကားတိုင်၌ အသေသတ်ကြပြီး၊ အဘယ့်ကြောင့် ရောမစစ်တပ်တို့က “ခေါင်းဆောင်ကို ကျူလုံးဖြင့် ရိုက်ခြင်း၊ တံတွေးနှင့်ထွေးခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သတ်စေခြင်းငှါ၊ အပ်လိုက်ကြ၏” (မာကု ၁၅း ၁၉-၂၀)ဟူ၍ ပြုခဲ့ကြသနည်း?။
“ကိုယ်တော်၌ သေထိုက်သောအပြစ်တစုံတစ်ခုကိုမျှ မတွေ့သော်လည်း ကွပ်မျက်စေမည် အကြောင်း၊ ပိလတ်မင်းထံ၌ တောင်းလျှောက်ကြ၏” (တမန်တော် ၁၃း၂၈)။
ဂျွန်ထရက်စ်ရေးသားသကဲ့သို့ “မည်သူက အမှန်တကယ်ကိုယ်တော်မျိုးနွယ်ကို ပြညွန်ပေးမည်နည်း?” . . အကြောင်းမှာ၊ ကိုယ်တော်သက်ရှိထင်ရှားစဉ်တွင် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲသောသူတို့သာ အသက်ရှင်ခဲ့ကြ သည်။
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အဘယ်သူပြညွန်လိမ့်မည်နည်း? အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှသူ့ကို သုတ် သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
ဒေါက်တာ ယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ကြိယာ “ပြညွန်”သည် ကြားဝင်ပြန်ဖြေသူ သို့မဟုတ် တစုံတ ရာ အတွေးတစ်ခုကိုပေးသည်။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏သေခြင်းကို အသေချာတွေးကြသင့်၏။ သို့သော်၊ သူတို့ထိုသို့ မတွေးခေါ်ခဲ့ကြပေ” (Young, ibid., p. 352).
ယနေ့ခေတ်နှင့် မည်သို့ခြားနားမည်သနည်း? လူသန်းပေါင်းများစွာတို့လည်း ခရစ်တော်ကား တိုင်ပေါ်သေခြင်းနှင့်စပ်လျှန်း၍ မည်သို့မျှမတွေးခေါ်ပဲ ကြားရုံသာကြားရသည်။ “အသေအချာတွေး ခေါ်စဉ်းစားသင့်ကြပေမယ့် သူတို့သည် မတွေးခဲ့ကြပေ။” အဘယ်မည်သူက ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းအား နက်နဲ့စွာတွေးဖူးခဲ့သနည်း? မိတ်ဆွေ ထိုသို့သင်တွေးဖူးပါသလား? ခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်းက သင့်အတွက် မည်သို့အကျုံးဝင်သည်ကို မိတ်ဆွေ တွေးတောစဉ်းစားဖူးပါသလား? “
အဘယ်မည်သူက ခရစ်တော်၏မျိုးနွယ်တော်ကို ဖော်ပြနိုင်ပါသနည်း? ကိုယ်တော်သက်ရှိထင် ရှားစဉ်၌ လူတို့သည် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဂျွန်ထရတ်စ်ပြောကြားသည်မှာ၊ “ခရစ်တော် အားရက်စက်စွာ အသေသတ်သောသူတို့သည် ယနေ့ခေတ် အသက်တာမပြောင်းလဲသော သူတို့နှင့် ဆင်တူပါသည်။” ယနေ့ခေတ်လူတို့လည်း ခရစ်တော်၏အသေသတ်ခြင်းအား နက်နဲ့စွာတွေးကြည့်ဖို့ ပင် မလိုလားကြပေ။ “ခရစ်တော်၏ပြင်းထန်သော ဝေဒနာ”ဟူသော ရှပ်ရှင်ကား ထွက်ပေါ်လာသော အခါ၊ များစွာသောကျမ်းအနက်ပြန် သူတို့က ၎င်းရုပ်ရှင်သည် အတော်လေးကို လူတို့အား ထိရောက် စွာ တွေးခေါ်စေသည်ဟု ပြောကြသည်။ ၎င်းရုပ်ရှင်က လူတော်တော်များများတို့အား ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းကြားလိုစေပြီး နှိုးထမှုဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ၎င်းရုပ်ရှင်က လူငယ်များတို့ကို ဘုရား ကျောင်းသို့တက်ဖို့ တွန်းအားပေးသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
၎င်းရုပ်ရှင်သည် ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ယခုဆိုရင် ကိုးနှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ကျမ်းအ နက်ပြန်သူတို့အားကျသောအရာကို အချိန်များစွာ အကုန်ခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ် တော့ ၎င်းရုပ်ရှင်သည် စိတ္တဗေဒပညာရှင်တို့၏ တွေးခေါ်လျှက် ဖော်ပြချက်များသာဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းပြင်းထန်သောဝေဒနာသည် အဆုံးသတ်မဖြစ်သေးပါ။ သူတို့ကို မိမိတို့အခြေအနေမှန်သို့ ၎င်း၊ အပြစ်သားအဖြစ်သို့၎င်း၊ ပို့ဆောင်ပေးသည်။
၎င်းက အပြစ်အတွက်အရေးပါဆုံးသော နေရာပင်ဖြစ်သည်။ အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသော သူတို့ပင်လျှင် ခရစ်တော်၏ဝေဒနာကို သိမြင်သောအခါ ခဏတာတဖြုတ် ဝမ်းနည်းတတ်ကြသည်။ အရမ်းကောင်းပါသည်၊ လူတို့သည်ကိုလည်း အနည်းငယ်မျှနောင်တသံဝေဂကို ဖြစ်စေပါသည်။ သူတို့ သည် “ပိုက်ကွန်၌ငါးမိသလို” ခဏတဖြုတ်၊ မိမိတို့၏လောဘ၊ ဘုရားမဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း ကစားရာမှ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကျောင်း မတက်လိုသည့်အပြစ်မှ၊ ဘုရားအကြောင်းကို အနည်းငယ် စိုးစိမျှ တွေးတတ်လာသည်။ လူတို့အား ယေရှုကားတိုင်ပေါ်က ကယ်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတိရလာ ကြသည်။ “မည်သူက သူ၏အမျိုးကို ပြညွန်မည်နည်း?” အဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်သက်ရှိထင်ရှား စဉ် အသက်ရှင်ခဲ့ကြသောသူတို့နှင့် ယနေ့သင်တို့တူနေကြပါသနည်း?၊ သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ချစ်ခြင်း၊ ဘုရားမဲ့အသက်ရှင်ခြင်း၊ ဇာတိသဘောအမြင်အတိုင်း အသက်ရှင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်အ သက်မရှင်ခဲ့ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ် လူတို့၏ပုံရိပ်ကို ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါလား? အကယ်၍သာ သင်က မိမိကိုယ်ကိုသာ အမွမ်းတင်နေမည်ဆိုလျှင်၊ ပြည့်စုံသူတစ်ယောက် မဟုတ်သေးဘူး မဟုတ်ပါ လား? ဘုရားရှင်အကြောင်းမိတ်ဆွေ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ တွေးတောဖူးပါသလဲ? တနေ့လျှင် အချိန်မည်မျှကြာကြာ ဆုတောင်းခဲ့ဖူးပါသလဲ? ကားတိုင်ပေါ်က စီးကျသော ခရစ်တော်၏သွေးက သင့်အသက်တာအတွက် မည်မျှကြာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါသလဲ? မိမိကိုယ်ကိုသာ အထင်ကြီး နေမည်ဆိုလျှင်၊ ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသော ထိုးလူမျိုးစုနှင့် မခြားနားသေးပါ။ ထိုအရာသည အပြစ်အတွက် အရေးကြီးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာကသင့်ကို အပြစ်သားဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြနေ ပါသည်။ ထိုအခါသင်သည် ခရစ်တော်အကြောင်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး စိုးစိမျှ စဉ်းစားတတ်ပေမည်။ စနေနေ့ညနေတိုင်း ဤဘုရားကျောင်းသို့ တက်ရောက်လာပါသော်လည်း၊ “သင်သည် ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျှော်ခြင်းတန်ခိုးကို ငြင်းပယ်သူ” ဖြစ်နိုင်ပါသည် (၂တိ ၃း၅)။ ထိုသို့သောအသက်တာ၌ သင် လျှေက်နေမည်ဆိုလျှင်၊ မည်ကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏စီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်နည်း? သိက္ခာ တော်ရ အိုင်အိန်းမူရေစ့်၏ မကြာသေးမှီက ထုတ်ဝေသော ဒေါက်တာ မာတိုင်လွှိင်ဂျူံး၏ အကြောင်း ပြောကြားသည်မှာ၊ ဒေါက်တာလွှိင်ဂျူးHဟောကြားသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ လူသားတို့ အပြစ်အကြောင်း ဟောကြားခြင်းသည်၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသအကြောင်း ဟောခြင်းဖြစ်၏။ မယုံကြည်သူတို့အဖို့ အမျက်တော်တည်နေသည်ကို၎င်း၊ မီးငရဲ၌မည်သို့ခံစားရမည်ကို၎င်း ဟောကြား ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းငရဲသား ‘ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်’ (Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).
၃။ တတိယ၊ ခရစ်တော်၏ပြင်းထန်သော ဝေဒနာကို ဖော်ပြထားပါသည်။
“ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏။” ဟူသော စာကြောင်းကို အထူးဂရုစိုက်ပြီးဖတ်ကြစို့၊ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်လျှက်၊ (ဟေရှာယ ၅၃း၈) အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြပါ စို့၊
“မတရားစွာစီရင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကိုထုတ်သွားကြသည်။ အသက်ရှင်သော သူတို့၏ နေရာမှ သူ့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို အဘယ်သူပြ ညွန်လိမ့်မည်နည်း။ ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏။” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
ဒေါက်တာ မီရီလ်အက်ဖ်အန်ဂါ ပြောကြားသည်မှာ၊ ဟေရှာယ ၅၃တွင် မေရှိယဘုရင်နှင့်ပါတ်သတ်၍ ကြိုတင်ပြောကြားချက်သည် တစ်ဆယ့် ခုနှစ်ရာစုတွင် ခရစ်ယာန်တို့နှင့် ယုဒဘာသာတို့ကြား၌သာ အနက်ဖွင့်ခဲ့ကြသည်။ ဂျူးလူ မျိုးများအားလုံးက သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ၊ ဟေရှာယ ၅၃ကို ခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်က ပြည့်စုံစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (Unger, ibid., p. 1293).
,နေ့တွင် ယုဒပညာရှင်အားလုံးတို့က အနက်ဖွင့်ကြသည်မှာ၊ ဟေရှာယ ၅၃သည် ခရစ်တော်၏ ဝေဒနာကို ဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်၊ ဂျူးဘာသာဝင်တို့၏ ဘာသာဝင်အကြောင်းကို ရည်ညွန်းသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော သူတို့လက်ထဲ၌ ဂျူးလူမျိုးသည် ညှင်းဆဲခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံရ သော်လည်း ဤကျမ်း၏ဆိုလိုရင်းသည် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်မှာ၊ “ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ် ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏“ (ဟေရှာယ ၅၃း၈) ဟု ဆိုထားပါသည်။ “ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ် ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏”ဟူသော ကျမ်းစကားကို ဒေါက်တာဟင်နရီအမ်မိုရစ် ပြောကြားသည်မှာ၊ “ငါ၏လူမျိုးအတွက် အသေခံသည်” ဆိုရာ၌ ဂျူးလူမျိုးတို့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ခရစ်တော် သည် လူမျိုးဖြစ်သည်ဟု ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏အဆိုသာဖြစ်သည်။” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender's Study Bible, Word Publishing, 1995, p. 767). ကျမ်းစာ၏အမှန် တရားတွင် ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ထိုသူတို့နေရာ၌ ခရစ်တော် ဘုရား ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရခြင်းကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၏အပြစ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ အပြစ်အတွက် ခရစ်တော်ပေးဆပ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်!
“ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏” ဟူသော ကျမ်းစကားကို၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီးလ်သုံးသပ်သည်မှာ၊ ဂျူးလူမျိုးများနှင့် ရွှေးကောက်သော ခရစ်ယာန်များအလုံးဟု ဆို လိုသည်။ ခရစ်တော်သည် ဂျူးလူမျိုးများနှင့် သူ၏လူများတို့အားလုံးအတွက် ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည် (Gill, ibid., p. 314). ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီးလ်ပြောကြားခြင်းသည် အမှန်ဖြစ် သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
“ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို ခံလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၈)။
ခရစ်တော်သည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်စေ၊ တပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ မိမိ၏လူမျိုးအားလုံးအတွက် “ဒဏ်ခတ်” တော်မူခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးအတွက် ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသ သင့်နေသောအပြစ်သားတို့အဖို့၊ အပြစ်ကိုဖြေသောယဇ် ဖြစ်လေသည်။
သို့တိုင်အောင် အခြေအနေဟူ၍ရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်အပြစ်ရှိသမျှအဖို့ အသေခံပေးဆပ် သော်ငြားလည်း၊ သင်သည် ထိုသခင်ကို လက်ခံယုံကြည်ဖို့လိုပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံ သောသူတို့အဖို့၊ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံပေးဆပ်ခြင်းသည် အကျုံးမဝင်ပေ။ ကယ်တင်ရှင်၏အသွေး တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏အပြစ်စာရင်းမှ သင့်အားချေပေးဖို့သည် ယေရှုကိုသင်လက်ခံယုံကြည်ဖို့ လိုပါသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်၏အမှန်တရားတချို့တဝက် ပျောက်နေသည်ကို သင်သိဖို့လိုပါသည်။ မာန်နတ်က ဤအကြောင်း၌ လိမ်မာပါးနပ်နေပြီး မာန်နတ်ကသင့်ကို ကယ်တင်မည်တော့မဟုတ်ပါ။ တမန်တော် ရှင်ယာကုတ်ပြောကြားသည်မှာ၊ “မာန်နတ်သည် ဘုရားသခင်ကိုယုံ၍ တုန်လှုပ်၏” (ယာကုတ် ၂း၁၉) ၌ ဆိုလိုပါသည်။ ခရစ်တော်၏သေခြင်းနှင့် စပ်လျှန်း၍ မာန်နတ်၌ “ဦးနှောက်အသိ”သာ ရှိသည်။ အကယ်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုပါက သင်သည်ပို၍ တွေးခေါ်ဖို့လိုပါသည်။ ခရစ်တော်ထံ မိမိအသက် တာ ဆက်ကပ်အပ်နှံလျှက် ယုံကြည်ဖို့လိုပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ဖြင့် အသက်တာ ပြောင်းလဲဖို့လိုပါသည်။ သို့မဟုတ်၊ ကိုယ်တော်၏ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းအကြောင်း သိလျှက်နဲ့ ငရဲထဲသွားရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ အေ.ဒဗလျှူ တိုဇာ ဆန့်ကျင်၍ဟောသော “အပေါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်” အကြောင်း နားထောင်ကြည့်ပါ။
ဘာသာရေး၌အသက်တာ ပြောင်းလဲရေးသည် ဝိညာဉ်မဲ့သော စက်ရုပ်လူသားကဲ့သို့ ဖြစ်နေ သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဟာနေသော စာရိတ္တမဲ့အသက်တာနှင့် အာဒံ၏အတ္တစွဲစိတ် ထားကို သိမြင်ကောင်းသည်၊ ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းမဲဖြစ်သော အသိဥာဏ်မဲ့တို့၏ ချစ် ခြင်းမေတ္တာကိုပင်လျှင် “ရယူ”ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ (A. W. Tozer, D.D., The Best of A. W. Tozer, Baker Book House, 1979, page 14).
“တလောကလုံးက ဝိညာဉ်မဲ့စက်ရုပ်လူသားတို့ပမာ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသို့ ဦးတည်နေ ကြပြီ”။ ထိုအရာကို ခရစ်တော်မဲ့ဘ၀ဟူ၍ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ဖူးသည်! “အပေါ်ယံဆန်”ခရစ်ယာန်တို့သည် ခဏတဖြုတ်သာ ဆုတောင်းတတ်ကြပြီး၊ ချက်ချင်းနှစ်ခြင်းပေးကြ၏။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ခရစ်တော် ၏သေခြင်း၊ အသက်ရှင်ပြန်ခြင်းအကြောင်း မရှင်းလင်းပေးကြပေ။ ထိုသော အဓိကအချက်တို့ကို ချန် ရစ်ခဲ့ကြသည်! သမ္မာကျမ်းစာက ထိုသို့မသွန်သင်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာက သင်၏အပြစ်အကြောင်း ထိုအပြစ်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ ခရစ်တော်ထံရူအးကရောက်လာရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ကို မိမိ၏အရှင် သခင်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုးစားပြီး အတွင်းဝိညာဉ် ရှင်ပြန်လာသည့်တိုင်အောင် ကိုးစားမျော်လင့်ရမည် ကိုသာ သမ္မာကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ ထိုသို့ပြုပြီးမှသာလျှင် ပရောဖက်ဟေရှာယ မိန့်ကြား ခဲ့သကဲ့သို့ သင်လည်း ရင့်ကျက်သောအသက်တာ၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ် သည်။ ဟေရှာယကျမ်း၌ လာသည်ကား၊
ခရစ်တော်သခင်ကို သင်လက်ခံယုံကြည်သောအခါ၊ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရပြီး၊ ထိုခဏတွင် အသက်တာပြောင်းလဲမည်၊ သင်၌ အရင်မဖြစ်ခဲ့ဖူးသောခံစားချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါ မည်။ လုံး၀ အရင် သင်၌မဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အရာဖြစ်သည်! ကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်ပါက ယေရှုခရစ်တော် ကို ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်ပါ!
အတူတကွ မတ်တပ်ရပ်ကြပါစို့၊ အကယ်၍သင်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်လိုပါ က၊ မိမိတိုင်တဲ့နေရာမှ ဆွေးနွေးခန်းအနောက်ဘက်ဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။ ယေရှုခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ မိမိအသက်တာကို ခရစ်တော်၌အပ်နှံခြင်း စသောအကြောင်းအရာများကို ဒေါက်တာကေကန်မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားပါမည်။ ထိုသို့ဆွေး နွေးလိုသောသူတို့အဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ မစ္စတာလီ ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ဂရိတ်တန်အယ်လ် ချန်မှ ဟေရှာယ ၅၃း၁-၈ အထိ ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၉၅-၁၉၈၅ ခုနှစ် အာဗီးစ် ခရစ္စတင်ဆန် သီကုံးရေးသားသော “ယေရှုရှင်ကယ်တင်ရှင်” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါ သည်)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၈)က၊ (မဿဲ ၂၆း၆၄၊ ၆၆-၆၇၊ ၂၇း၁-၂၊ ၂၆)၊
(ဟေရှာယ ၅၃း၈)က၊ (မာကု ၁၅း၁၉-၂၀)၊ (တမန်တော် ၁၃း၂၈)၊
(၂တိ ၃း၅)၊ (ရောမ ၃း၂၃)။
၃။ တတိယ၊ ခရစ်တော်၏ ပြင်းထန်သောဝေဒနာကို ဖော်ပြထားပါသည်။
(ဟေရှာယ ၅၃း၈)ဃ၊ (ယာကုတ် ၂း၁၉)။